About Us - Like Madax (Tianjin) Co., Ltd
Canjeero iyo lug Nooca BV
Dabka La Dagaalamaya BV
Flange Balanbaalis Madax
Waalka balanbaalis Eccentric
Qalab adag oo adag
Waalka albaabka jilicsan
Water Control Madax
Like Madax (TIANJIN) Co., Ltd caasimadii ee Tianjin - dhaqaalaha ugu firfircoon ee waqooyiga China. Like waalka waa waxyaabaha waalka shirkadda saarka-dhamaadka sare ah taas oo uu leeyahay cilmi-design iyo horumarka, wax soo saarka, adeegyada marketing ka mid ah. Waxaan leenahay Independent R & D xarunta, technology-saarka sare iyo adag fulinta heerarka caalamiga ee ku habboon. Iyadoo hababka sare design injineernimada, qalabka wax soo saarka fiican oo heer sare, goobaha xaqiijinta baaritaanka iyo fikirka ah wax soo saarka caatada ah, aan "Like Madax" hubiyo in qayb kasta ee wax soo saarka kasta oo aan Supply waa in tayo sare leh iyo waxqabadka.
hubinta tayada uu ka yimaado maamulka si faahfaahsan kasta. Tan iyo markii la aasaasay, shirkadda ayaa qaatay design computer-dhameeya, sida CAD oo camal adag, iyo ugu horeysay inay soo bandhigto maamulka sare Lix li'idiisa. Aasaasay set oo ah habka maareynta tayo adag, sii Si eryan eber waxyaabaha iin. Waxaan ku takhasusay waalka balanbaalis, waalka iridda, waalka dunida dacaladeeda, waalka jeeg, waalka kubada, waalka gacanta Haydarooliga, dheelli waalka iyo alaabooyinka kale ee taxanahan. Waxa kale oo ay soo saartaa filtarka dhismaha ee qalabka kala duwan, cadaadis, size iyo alaabooyinka kale, waxaa jira in ka badan 50 taxanaha, in ka badan 1,200 oo kala duwan.
Like Madax (Tianjin) Co., Ltd
awoodda wax soo saarka ee sannadlaha ah ee in ka badan 6,000 oo metric. Products daboolay oo dhan qeybo ka mid ah dalka iyo dhoofiyo Europe iyo Mareykanka iyo dalalka kale, si weyn loo isticmaalaa in biyo iyo dheecaan, dhismaha, korontada, kiimikada, qodniinka- iyo warshadaha kale. xariif Product, tayo sare leh oo qiimo macquul ah, isku halleeyey by user ah.
Waxaan soo maray shahaado nidaamka tayada ee caalamiga ah ISO9001, Like Madax leeyahay qalabka processing mashiinka waaweyn iyo dhexdhexaad fiican 178 qaybood, 32 nooc oo qalab kormeerka ee dibeda laga keeno. novel Product design, qaab-dhismeedka sare, technology-soo-saarka fiican, wax soo saarka caatada ah, complete ogaado. The gacanta nidaamka hubinta tayada adag iyo nidaamka maamulka, waxaan gaadhay heer sare ah design, horumarka, wax soo saarka iyo baaritaan kormeerka. awoodda wax soo saarka Strong dhigeysaa "Like waalka" in wakhtiga ugu gaaban suurogal in ay bixiyaan alaabta, iyo in la siiyo adeeg waqtiyeysan oo hufan-iibka ka dib si ay u gaaraan qancinta macaamiisha ugu badan.
Mustaqbalka waa la dhisi doonaa laga bilaabo maanta, sida Madax u noqon doono in ay fasalka-koowaad sayniska iyo farsamada hal-abuurnimo, adeegga fasalka-koowaad, ruux ganacsi oo tayo leh toop in ay ka qayb abuurka mustaqbalka. Iyadoo tayada alaabta iyo qancinta macaamiisha si ay u qaabeeyaan our ganacsi Company, Iyadoo raacdada soo raynayn iyo horumarka joogtada qudhayadu si dhaafsiisan. "Likv riyo" ka dhigi doonaa "riyo Chinese" ka xiiso badan!
H12, Tengfei Base, Xiaozhan Ind Zone., Jinnan coal., Tianjin, Shiinaha (Dhul)
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka v ...
Warbixin: Xiriir cusub oo farsamo cusub ...
Right Copyright - 2018-2020: Dhamaan Reserved Rights.